Dhuuqida Ibta Naasaha & Baashida Bushimaha Sare & Hoose oo Dumarku Ka Helaan Gariir Dhamaystiran!! - Galmada.net
Dhuuqida Ibta Naasaha & Baashida Bushimaha Sare & Hoose oo Dumarku Ka Helaan Gariir Dhamaystiran!!
April 7, 2017 June 11, 2017 admin
Shumiska ama dhuuqida waxaa ugu macaan in labada qafood ay midba midka kale uu dhuuqo faruurta hoose iyadoo haweenka ay aad ugu raaxaystaa dhuuqida
Waxa ayna faruurta ninka ay qanqaniinaan waxaana xusid mudan in ay dhuuqida u kala baxdo dhox siyaabood waxaana ugu macan mida sida aayarka layskugu daliigo iaydoo leesku xanta xanteeyo labada farooryood.
Ibta naasaha iaydune haweenka waxay ka qaadaan kacsi waali ah qaasatan marka inta naasaha laga jaqo iyadoo si qafiifa ilkaha looga qanqaniino hadana sidaas naasaha uga qaniintid waa hubaal adigay isku kaa dhiibaysaa.
Inta badan dumarka ayaa raaxo macaan oo heer sare ah waxeey ka qaataan ibta hore ee naasaha dumarka,inkastoo dabeecad ahaan dumarku aysan isku dabeecad ehayn.
Waxan shaki ku jirin in dumarka 89% ay raaxo waali ah ka qaadaan dhuuqmada ibta naaska weliba marka aad ilkahaa hore ee afka aad ku qabato ibta naaska,waxeey gabadhu dareemeysaa raaxo heer sare ah,hana ka bixin afka inta naaska inta ay gabadha ka qaadaneyso raaxo macaan.
Hadii aysan gabdhu jecleen inaad inta hore naaska u dhuuqdo,isku day inaad si farsameysan u dareensiiyo macaanka ku jiro dhuuqmada ibta naasaha.Afti laga aruuriyay dumarka laraaxeesto rag kala duwaan ayaa isku aragti waxeey ka noqdeen in raaxo waali ah laga qaado dhiiqdamada ibta naasaha.
In Lamaanahaga ay maqsuud ku noqato.
2-In Lamaanhaaga ay hesho raaxo macaan oo aysan ka caajiseen
3-In Lamaanhaag ay sugiweyso la kulnkaaga gaarka ah.
4-In Lamaanahaaga ay joogteyso dalabkaaga dhinaca Galmada ah.
Si aad u hesho galmo macaan sidaan sameyso
Maxay dumarka isticmaala Siigada Farta ka dhaxlaan Mustaqbalka